IYunivesithi yaseToronto eQhubeka neMfundo | Iinkcukacha ezigcweleyo kunye nokuSetyenziswa 2022
IYunivesithi yaseToronto eQhubeka neMfundo | Iinkcukacha ezigcweleyo kunye nokuSebenza
Fumanisa yonke into oyifunayo malunga neDyunivesithi yaseToronto eqhubekayo ngemfundo ukuba ucinga ngokuqhubela phambili izifundo zakho okanye ukuphuhlisa izakhono zakho kwiYunivesithi. Eli nqaku liqulathe zonke iinkcukacha malunga nenkqubo ukukunceda uthathe izigqibo ezifanelekileyo.
Namhlanje, ndifuna ukuba sijonge kwizikhundla eziphezulu KwiYunivesithi yaseToronto Imfundo eqhubekayo; Isingeniso kwiSikolo, indlela yokufaka isicelo sokwamkelwa, kunye nezinye iinkcukacha ezifana neefizi zokufunda, iindleko zokuphila eToronto ngokukodwa kubafundi bamazwe ngamazwe, kunye neemfuno zokungeniswa; kodwa kuqala, mandikucacisele ukuba yintoni eqhubekayo ngemfundo xa kunokwenzeka ukuba ungayiqondi ncam.
Yintoni Imfundo Eqhubekayo?
Ukuqhubeka kweenkqubo zemfundo kunokubandakanya;
IYunivesithi yaseToronto eQhubeka neMfundo
Intshayelelo kwiYunivesithi yaseToronto yeSikolo seZifundo eziQhubekayo (i-SCS)
Uluhlu lweYunivesithi yaseToronto yeSikolo seNkqubo yokuQhubeka neMfundo kunye nezifundo
IYunivesithi yaseToronto eQhubeka nokuFundiswa kweMfuno
IYunivesithi yaseToronto yeSikolo seBhasari yezeMfundo eQhubekayo kunye neeBhaso
Isikolo esiQhubekayo sokuFunda iMali yokuFundisa / iiFizi zeKhosi
Iindleko zokuphila eToronto
Indlela yokufaka isicelo sokwamkelwa kwiDyunivesithi yaseToronto yeSikolo esiQhubekayo seMfundo / neziFundo
IYunivesithi yaseToronto Idilesi Yonxibelelwano
Ukuqhubeka kwemfundo ngokweWikipedia kuthetha uqeqesho lwasemva kwesikolo esiphakamileyo, nokuba lolomntu, ikhondo lomsebenzi, okanye uphuhliso lwemfundo.
Ukuqhubeka kwemfundo luqeqesho lokunyusa umgangatho wakho wokufunda okanye inqanaba, ukufunyanwa kwezakhono okanye uqeqesho lophuhliso lomsebenzi. Inokubonwa kwakhona njengendlela yokufumana ukwamkelwa kule yunivesithi uqeqesho iphantsi kwayo.
Ngokukodwa yeyabantu abadala okanye abafundi abakumgangatho wokusebenza abafuna ukwenza uqeqesho okanye imfundo ethile.
Izifundo zekhosi zemfundo zabafundi abangaqhelekanga
Uqeqesho lomsebenzi ongekho isidanga
Iikhosi zophuhliso lomntu
(Intshayelelo, iiNkqubo kunye neekhosi, iimfuno zoKwamkelwa, iiBhasari kunye neeBhaso, iindleko zokuphila eToronto, iiFizi zoThutho kunye nendlela yokwenza isicelo sokwamkelwa)
Isikolo seYunivesithi yaseToronto yezifundo eziqhubekayo (i-SCS) zibonelela ngezifundo ezimalunga ne-700 kwiindawo ezingaphezu kwe-40 zenkqubo kunye nangaphezulu kweekhosi zokuqinisekiswa kwamakhondo ze-100. Iqela labo lenziwe ngabahlohli abamalunga nama-200 abangamashishini okanye iingcali ngemiba yezifundo.
Banikezela ngeenkqubo zoLwimi lwesiNgesi ezizezinye kwi-IELTS, TOEFL, njl.njl. Kwabo bafuna ukwamkelwa kwiikholeji okanye kwiiyunivesithi. Oku ikakhulu kulungiselelwe abafundi bamanye amazwe abangenako ukungqina ubuchule babo boLwimi lwesiNgesi.
Iinkonzo zabo zokuthelekisa imfundo zezabo bajonge ukuba ziingcali kumacandelo abo okanye bafudukele eCanada.
Ishishini, ezeMali noLawulo
Uphuhliso lomsebenzi kunye nezakhono zoNxibelelwano
Ezempilo kunye nezeNzululwazi
Ulwazi, iTekhnoloji, iNdalo, kunye nezoBunjineli
Ukuthengisa kunye nonxibelelwano
Ukufaka isicelo seYunivesithi yaseToronto eqhubekayo ngemfundo kufuneka ubuncinci ube neminyaka eli-18 ubudala. Imvelaphi yakho yangaphambili yezemfundo ayinamsebenzi nangona inkqubo nganye enikezelwa apho ineemfuno ezizodwa ezilindeleke ukuba ube nazo.
Unokutyelela Iwebhusayithi esemthethweni yemfundo eqhubekayo ngokusemthethweni ukufumana izinto eziyimfuneko kuzo naziphi na iinkqubo onokufuna ukuzisebenzisa.
Isikolo seYunivesithi yaseToronto sokuqhubeka sinesibonelelo sabafundi abakhoyo ukuba bangenise izicelo zebhasari nge-imeyile yabo ngqo- scs@utoronto.ca.
Amaxwebhu emali ayimfuneko ekusetyenzisweni kwale bhasari de isicelo sakho samkelwe.
IYunivesithi yaseToronto SCS ibonelela ngale nkxaso ukulungiselela abafundi babo abanokuthi bangabinamdla ngokwaneleyo ukuba bazibonele kuqeqesho lwezezimali.
Ingxowa-mali yebhasari iza kukunceda ucime iintlawulo ezingekahlawulwa. Unokufaka isicelo kuphela xa ufuna inkxaso yemali.
Ukongeza kwinkqubo yabo yebhasari, isikolo seYunivesithi yaseToronto semfundo eqhubekayo siyayibona impumelelo engaqhelekanga ngamabhaso. La mabhaso yinkxaso esekwe kumgangatho ofanelekileyo enikezelwa kubafundi abanetalente.
I-AU JUK KIU Award kwiLwimi lwesiCanton
UMarilynn Booth Award yokuGqwesa
Ibhaso leSihobe sikaJanice Colbert
UTimothy Fong kunye neCnrico Chir Award
Ibhaso likaMarina Nemat lokuBhala ngokuYilayo
Ibhaso le-Ogilvie lokuGqwesa kuLawulo lweProjekthi
IPenguin Random House eCanada iBhaso labafundi
I-Award ye-Elaine Stirling yeNkcazo yokuBalisa
Onke amabhaso ahlawulwa rhoqo ngonyaka.
IYunivesithi yaseToronto yoBugcisa nezoLuntu iifizi zezifundo I-CAD $ 355 Okwangoku, kodwa kuya kuphononongwa sisikolo.
Iikhosi zeshishini ziya I-CAD $ 599, Izifundo zoPhuculo lomsebenzi.
UkuBhala ngokuBumba kunye nabanye bahluka phakathi I-CAD $ 400 ukuya kwi-CAD $ 600 Imirhumo yekhosi yexesha elinye.
Uninzi lwezi zifundo zifundiswa ngokupheleleyo kwi-Intanethi, ngelixa ezinye zizo iikhosi zokufunda umgama; Kuthetha ukuba uya kwi-intanethi nakwiiseshoni zekhampasi.
Irente yendlu eToronto inokusukela (Cad) $ 450 - $ 2000 inyanga.
Ngokusisiseko, kuba sisixeko esikhulu esikhulu unokufumana iintlobo ezahlukeneyo zezindlu kunye neemeko zokurenta. Ukuba uthatha isigqibo sokuhlala kwikhampasi, iihostele zijikeleze i-8,000 - 10,000 yeedola ze-CAD ngonyaka kubandakanya ukutya; kodwa ufumana iinyanga ezisi-8 kuphela njengoko kufuneka uphume phambi kokuphela kwehlobo. Unokufumana amagumbi kumagumbi okwabelwana ngawo nge-450 -550 CAD ngenyanga.
Ukutya kubiza kancinci, iivenkile zokutyela zibiza irhafu ye-15% ngaphezulu kwetyala lakho kunye nombulelo. Kubiza kakhulu ukuthenga impahla kwiivenkile ezinkulu kuba akukho rhafu kwaye kutshiphu ukuthenga nayo.
Iirhafu ze-TTC zihlawula i-CAD $ 3 ngohambo ngalunye. Ukupasa kwenyanga zi-100 kunye nento. Unokufumana isaphulelo seTTC sokudlula kwiYunivesithi yaseToronto Imibutho yabasebenzi; zitshiphu kancinci.
Ndicebisa ukuba uthenge ibhayisekile kuba indleko zokuhamba zisimahla kwaye ukuba ufuna ukuthenga into ungakhwela ibhayisekile apho kwaye uyifumane. Ikhampasi ye-UofT kunye nedolophu yaseToronto zifikeleleke kakhulu ngebhayisikile.
Ezinye iindleko zokuphila njengokutya, iincwadi, ukuzonwabisa njl njl, ukuya kuthi ga kwixabiso elifikelelekayo le-CAD $ 800 ukuya kwi-CAD $ 1,000 ngenyanga kuxhomekeke kwindlela yokusebenzisa inkcitho yomfundi.
Okokuqala, kufuneka uqinisekise ikhosi ofuna ukuyifunda kwiwebhusayithi yesikolo, ufumane iimfuno ezithile zekhosi zokwamkelwa, kwaye ufake isicelo ngaphambi komhla wokugqibela.
Unokufaka isicelo sebhasari emva kokuba wamkelwe ukuba ufuna uncedo lwezemali. Ukuba ungumfundi wamazwe aphesheya okanye umfundi osebenza ngaphandle kwexesha elininzi, unokufaka isicelo sokufunda naziphi na izifundo zabo kwi-Intanethi; Banikezela ngezifundo ezifanayo nezo zifundiswa ekhampasini, kunye nezatifikethi.
Unokufikelela kwiziko ngoku;
Indawo: Isikolo sise-158 iSt. George Street, eToronto Ontario, M5S 2V8, Canada.
Njengoko bendibhale ngokufanelekileyo ngaphambili, awudingi naziphi na iziqinisekiso zemfundo zangaphambili zokufaka isicelo kwiYunivesithi yaseToronto kwisikolo semfundo eqhubekayo njengoko inkqubo ivulelekile kubo bonke ukuba uhlangabezana neemfuno endizichazile ngasentla.
Ungathatha inxaxheba kule nkqubo naphi na kwihlabathi liphela kwaye ufumane isatifikethi esisemthethweni ukugqitywa kwenkqubo kwi-intanethi.
Faka isicelo kwiYunivesithi yaseToronto kwiikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi
Izifundo zoRhulumente eziFundiweyo eCanada
isikolo sokuqhubeka nezifundoiyunivesithi yasetoronto eqhubeka nemfundoiyunivesithi yesikolo sasetoronto yezifundo eziqhubekayo
Okulandelayo Post:Ukufundiswa okupheleleyo kwee-Scholarships kubafundi bamazwe ngamazwe e-UK